Building Construction and Infrastructure: အဝီစီ တွင်း နှင့် ရေသန့် စင်စနစ် များ
အဝီစီ တွင်း နှင့် ရေသန့် စင်စနစ် များ
သောက်သုံးရေ ဖြန့်တဲ့ Domestic (Potable) Water Supply စနစ်တိုင်း မှာ ရေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန် နဲ့ အညီ သောက်သုံးရေ အဆင့်မှာ အမြဲတမ်း ရှိနေအောင် ဂရုစိုက် ပေး ရပါတယ်။ ယူတဲ့နေရာ၊ ရေစစ်စနစ်၊ ရေဖြန့်ဝေတဲ့ ပိုက် စနစ် နောက်ဆုံး ဘုံဘိုင်ခေါင်း၊ ရေသုံးတဲ့ နေရာအားလုံး အထိ အညစ်အကြေး အပြင် က နေ လုံးဝ မဝင်နိုင်အောင်၊ အထဲမှာ လည်း မပွား အောင်၊ ရေပြောင်းပြန် မစီးနိုင်အောင် သေသေချာချာ ဂရုစိုက် ရပါတယ်။ ဒီအတွက် ရေဖြန့်ဝေပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တွေ ရော၊ ပိုက်ဒီဇိုင်း လုပ်ပေးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ရော၊ ဆင်ပေးတဲ့ လိုင်စင်ရ ပိုက်ဆက်သမား ရော အားလုံးမှာ တာဝန် ရှိပါတယ်။ ဒီစည်းကမ်းချက် တွေ ကို ခပ်ပေါ့ပေါ့ ထားလို့ မရပါဘူး။ ချွင်းချက် မရှိ လိုက်နာ ကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ စည်းကမ်း က အဆင့်အတန်း မမီရင်၊ မလုံလောက် ရင် ပြင်ရပါမယ်။ (လက်ရှိ အစမ်း ထွက်ထားတဲ့ MNBC ရဲ့ Part 5D – Plumbing Code မှာ ပြင်ဘို့လိုအပ်ချက် တွေ မဖြစ်သင့်တာတွေ နဲ့ ခေတ် နောက်ပြန်ဆွဲထားတာတွေ အများကြီးပါ။ ဒါတွေ ကို ပြင်နိုင်အောင် လုပ် ပေးရပါမယ်။ ရောပြီး လိုက်နေရင် အနာဂါတ် မျိုးဆက်အတွက် မကောင်းပါဘူး။ နောက်မှသီးသန့် တင်ပေးပါမယ်။ စကားချပ်။)
အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း အိုဟိုင်းအို ပြည်နယ် မြို့နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ နေရာ မှာ အဆောက်အအုံ တချို့ ဆောက်ဘို့ ဒီဇိုင်း လုပ်ရတဲ့ အခါ ကိုယ်ပိုင် ရေတွင်း ပဲ အားကိုးစရာ ရှိတဲ့ နေရာ အချို့ ပါနေပါတယ်။ လူအနည်းငယ် အတွက် မို့ Tube-Well က အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ (မဟာရန်ကုန် မှာ တော့ အဝီစီတွင်း ဆိုတာ မရှိသင့်တာ နဲ့ နောက် ဘာနဲ့ တူလဲ မကြာခင် က မှ ရေးတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။) လူ ၂၅ ယောက် အထက်၊ Public Water Supply ကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး Evnironmental Protection Agency က ကိုင်ပါတယ်။ အကြောင်း လိုအပ်ချက် Links တွေ ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လူ ၂၅ ယောက် အောက် ကို တော့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန က ကိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက် က တော့ EPA ထက် မနိမ့်ပါဘူး။
P.S. အိုဟိုင်းအို ပြည်နယ် က မြောက်ပိုင်းကျတာ မို့ ဆောင်းရာသီ ဆို ရေခဲမှတ် အောက် အထိအတော်ကြာကြာ အေးနိုင်တာမို့ Freeze Protection လိုပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ရေလှောင် ကန် ကို ရေမခဲ စေဘို့ မြေအောက် မှာ လည်း မြှုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မြန်မာပြည် က ကန်ထရိုက် တိုက်တွေ လို ပြီးစလွယ် အုတ်ကန် လုပ်လို့ မရပါဘူး။
ပိုက်ပစ္စည်း တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နဲနဲ ပြောပါအုံးမယ်။ ပိုက်ပစ္စည်း တွေ က သောက်သုံးရေ အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပိုက်အမျိုးအစား ဖြစ်ရပါမယ်။ ကြက်တန်း က သွားဝယ်တဲ့ ကြေးပိုက်၊ ဂျီအိုင်ပိုက် (သို့) ပီဗီစီ ပိုက် နဲ့ ဆင်ပစ်လိုက် မယ် လုပ်လို့ မသင့်ပါဘူး။ ပြန်ကျိုထားတဲ့ recycled pvc သုံးလို့ မရသလို ရေဆိုး မိလ္လာ အတွက် လို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ ပိုက်အမျိုးအစား ကို လည်း သောက်သုံးရေ အတွက် သုံးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
ပီဗီစီ ရေဆိုး မိလ္လာပိုက် ကျတော့ လည်း ပိုက် Fittings တွေ ချိုးထားတဲ့ ပုံ မတူပါ။ (In US, we called Soil Waste and Vent Pattern, PVC Socket Fittings: ASTM D 2665, made to ASTM D 3311, drain, waste, and vent patterns and to fit Schedule 40 pipe. In Singapore, there are separate standards too…)
Cast Iron သံပိုက် တွေ က ရာစု နှစ်ပေါင်း များစွာ သုံးခဲ့ ပေမဲ့ ခုအချိန် မှာတော့ မှေးမှိန်သွားပါပြီ။ အဓိက ကတော့ သံချေးစား ပြီး အတွင်းမှာ ဗျုတ်ထ။ ရေထဲ မှာ လည်း သံချေးပါ။ နောက် Pipe Friction လည်း များလို့ပါ။
Copper Pipe ဆိုရင်လည်း အဓိက ကတော့ ပစ္စည်း သန့်ဘို့လိုပါတယ်။ အမှုန် မထွက် ဘို့ နဲ့
ခဲမပါဘို့၊ Dimension မှန်ဘို့ နဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပိုက်အထူ ရှိဘို့ တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
GI (Galvanized Iron) ပိုက်လည်း ထိုနည်း ၄င်း ပါပဲ။ အရည်အသွေး သိပ်ကောင်းအောင် ထိန်းနိုင်တဲ့ စက်ရုံ က ထွက်တာ ဖြစ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပိုက်အတွင်း မှာ မကြာခင် သံချေး လိုက်လာပါမယ်။ နောက် Galvanizing Material ထဲမှာ ခဲပါရင် သွားပြီ။ ခဲဆိပ်သင့်ပေရော့။ (စကာင်္ပူ မှာ GI Pipe ကို သောက်သုံးရေ အတွက် သုံးခွင့် မရှိပါ။) Galvanizing လုပ်တယ် ဆိုတာ ကလည်း Zinc & Aluminum ကို အပူပေးအရည်ဖျော်ထားတဲ့ မီးဖိုထဲ နှစ်လိုက် အက်ဆစ်ထဲ နှစ်လိုက် လုပ်ပြီး ရလာတာပါ။ ပစ္စည်း မသန့် ရင် ခဲပါနိုင်ပါတယ်။
Lead (ခဲ) ကို ကယ်လီဖိုးနီးယား မှာတော့ ချက်ချင်း သေမဲ့ အဆိပ်လို ရွံ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိ US မှာ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း တွေ က ခဲ အနည်းဆုံး (သို့) ခဲလုံးဝ သန့်စင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို ပဲ သုံးခွင်ရှိပါတယ်။
PVC ဆိုရင်လည်း ရေထဲ ကို အဆိပ်မထွက် အောင် သေချာ လုပ်ထားတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်ဘို့ နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ရေဖိအား ဒါဏ် ကို ကောင်းကောင်း ခံနိုင်တဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နေဒါဏ် (UV attack) ကို လည်း မခံနိုင်ပါဘူး။ ပလတ်စတစ် ပိုက် အမျိုးအစား အားလုံး ဒီအတိုင်းပါပဲ။ Recycle Material ပါလို့ မရပါဘူး။ Corrosion Protection, Back Flow Prevention and Contamination Control, Water Hammer, Cavitation ဒါတွေ က လည်း ဖြစ်သလို လုပ်ထားတဲ့ Plumbing Code နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
စကားမစပ်၊ Middle East Project တစ်ခု မှာ ဂန္ဓာလရာဇ် ပြည်က Stainless Steel Pipes တွေ သုံးတာ တစ်နှစ်အတွင်း သံချေး တက် လာလို့ တစ်ဆိုဒ် လုံး ပြန်လဲဘို့လိုတဲ့ အဖြစ် ကို ဌာနတွင်း ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခု က နေ ကြားရပါသေးတယ်။ (မြန်မာ ပြည် ကို လည်း ခုချိန် ထ ကြိုပေးထားတဲ့ ပုဒ်မ နဲ့ (ပြစ်မှုမဂ္ဂဇင်း က အသုံးနဲ့ ဆို) အလိုတူတူ မတူတူ သားမယား အဖြစ် ဆက်လက် ပြုကျင့်နေတုန်း။ ဘယ်လောက်ထိ ဆက် ခံနေရမယ် မသိ၊)
ပိုက်နဲ့ ဖြန့်တဲ့ သောက်သုံးရေ မှာ ကြိုသောက် မှ ဘေးကင်းတဲ့ ရေ ကို စံချိန်မီတယ် လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ သောက်ရေ ကို ရေသန့်ဗူးမှာ သောက်မယ် ဆိုရင် လည်း ထမင်းမစားခင် လက်မဆေးတော့ဘူးလား။ ဇွန်းခရင်းရော၊ သွားတိုက် ပလုတ်ကျင်း မလုပ်ဘူးလား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မဆေးရတော့ဘူးလား။ အသီးတွေ (ဥပမာ သရက်သီး၊ နာနတ်သီး) ကို ရေနွေးဖျော စားရမှာလား။
သောက်ရေကန် နဲ့ ရေတွေ ကို သောက်သုံးရေ စံချိန် မှီမမှီ ဆင်ပြီးတစ်ခါ၊ပြီးတော့ နှစ်စဉ် လို စစ်ရတာ လည်း ရှိပါတယ်။ စကာင်္ပူ မှာ လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ရေကန်ထဲ က ရေ ကို တစ်နှစ်တစ်ခါ အနည်း ဆုံး ပြန်စစ်ရပါတယ်။
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 10:32 PM Labels: Water Supply